Relax kwiLake Minnewaska - I-Airbnb
Relax kwiLake Minnewaska
Le yi-2 bdrm / 1 yokuhlamba ekwazi ukulala i-8 ngokukhululeka. Ngunyaka wonke ekhaya echibini. Akutshaywa, Akukho zilwanyana zasekhaya, Iingubo, imiqamelo, iilinen & neetawuli zinikezelwe. Sinonxweme olunesanti oluthe tyaba. Ikhabhinethi izinyuko ezili-10 ukusuka eChibini. Ichibi elikhulu lokuLoba! IMinnewaska lichibi le-13 ngobukhulu eMN. Iiyure ezi-2 kuNW yaseMinneapolis/St.Paul.
Zombini iGumbi lokuHlala (uKumkanikazi) kunye negumbi lokutyela (eligcweleyo) lineeSofa zokulala. Igumbi lokulala eli-#1 lineBhedi ePheleleyo kunye neBhedi yamawele eyongezelelweyo (i-Cot) Omabini amagumbi okulala anodonga oluxhonywe kwiscreen esisicaba se-smart TV's. Ikhitshi isebenza ngokupheleleyo, yonke into oyifunayo ukupheka nokubhaka. I-Weber ye-grill yangaphandle ukuze isetyenziswe ziindwendwe. Ukuba iimeko zechibi kunye nekhephu ziyavuma, iindwendwe ziya kukwazi ukufikelela kwizindlu zeentlanzi ukusuka elunxwemeni phambi kwekhabhinethi ngexesha lasebusika. NgeHlobo kukho idesika enkulu ejonge echibini enefenitshala yepatio, iitafile, iambrela, njl. IFiber Optic Cable High SpeedInternet isandula ukufakwa. Iwasha yomgangatho ongundoqo kunye nesomisi siyafumaneka. Akukho Zilo-qabane (izinja zityelele kwaye nabamelwane banezinja) Akutshaywa. Ubuncinci beminyaka yobudala bomqeshi wokuqala kufuneka ube ngama-25.
ibhedi elala umntu omnye eyi-1, iisofa ezikwazibhedi eziyi-2, umatrasi ompontshwayo oyi- 1
Rolling Forks Winery 3.9 yeemayile ukusuka kwikhabhini!
Indawo yotywala eMinnewaska House
Irhasi kwiLake-Hunts Resort
Ukutya okuLungileyo kwiLake Minnewaska- Lakeside Ballroom, Glenwood MN
Steak House-Brewery on Lake Access-Minnewaska House, Long Beach MN
Eyona Burgers yamaphiko eDolophini-AJ's, Glenwood MN
Indawo yokutyela kunye neNdawo yokutyela eLake Minnewaska-Waters Edge, Starbuck MN
Izindlu zeKofu-Hlanganisa, eGlenwood MN
Iivenkile zolonwabo eGlenwood!
Meco 7 - Valley Troll - MN Olive Co. - Northern Print Co. - Screen Prints Plus
Iimayile ezili-15 ukuya kwiDolophu yase-Alexandria!
I-Edge, Iincwadi zeCherry Street, iCreative Touch, iDawns Quilt Shop, iFlourish Botique, Molo Mhle, Abantu bakaJackie J's Bridal Kindred, Ilifa leMyuziyam yeLakes, iMagpie, iNarlies Boutique, Ngoku & emva koko kwaAkudala, INkampani yePotomac Bead, iRavnik & Co. , Iimveliso ezikrwada, ivenkile yezipho yaseScandinavia, iDashery, iTyotyombe leswekile & nezolo.
Iimayile ezingama-20 ukuya eMagnolia eMorris, MN!
I-Homestead, iMinesota Magnolia, i-Inherit Co., i-B iphefumlelweyo, i-Prairie Arts & Gifts, i-Lily emnandi.
Sisoloko sifumaneka ukuba ufuna nantoni na ngexesha lokuhlala kwakho nge-txt. Sihlala kwisithuba semizuzu engama-20 kwindlwana.